Hydration bladder bag Vagadziri & Suppliers - China Hydration bladder bag Factory
Hydration Bladder Backpack Kukwira Hiking Running
Mudiwa wepanze wemabhegi emvura ekunze, isa bhegi rako remvura mubhegi, uye gadzirisa chubhu yekukwevera pabhandi remafudzi.Iwe unogona kuzadza hunyoro chero nguva uye chero kupi uye kusunungura maoko ako.Kunyangwe uri kukwira, kumhanya, kuyambuka-nyika, kana kuchovha bhasikoro hazvikanganiswe.
Kunze Reservoir Bladder Backpack Inotakurika Cycling Running
Zvigadzirwa zvemitambo zvekunze zvinogona kuumba shamwari yakanakisisa nemabhegi emvura.Kunyanya kugadzirirwa mabhegi emvura emitambo.Unogona kunyatsoputira uye kutakura bhegi rako remvura.Inokubvumira kutakura bhegi rako remvura newe paunenge uri kunze, pasina kuwedzera mutoro kwauri.Inokutendera iwe kuzadza zviwanikwa zvemvura chero nguva kunze kuti uchengetedze basa remuviri.
Nhamba Nhamba: WBB-001
Zita rechigadzirwa: Hydration bladder backpack
Kushandiswa: Kufamba / Kumisasa / Kufamba
Saizi: 45 * 21cm
Yakanaka Hunhu Kunze Kwemutambo Reservoir Bladder Backpack
Yekunze yemitambo yemvura bhegi bhegi rinotora nyore uye kuita kune zvakanyanyisa.Hazvina mhosva kuti unonwa mvura here, unozadza mvura, kana kuchenesa bhegi remvura.Mabasa ese anogona kuitwa zvakananga pasina kutora bhegi remvura kubva mubhegi.Kune iwe uri kumhanyisana nenguva mumitambo, ndiye achava mubatsiri akanakisa.
Nhamba Nhamba: WBB-004
zvinhu: Oxford EVA
Huto rakasvibira kunze kwe hydration bhegi.Yakagadzirwa neakareruka EVA zvinhu, hazvizokonzere iwe wakawedzera mutoro.Inokubvumira kukurumidza kuzadza mvura panguva yekurovedza muviri.Chigadzirwa chacho chiri pedyo-chakakodzera uye chinofema pasina kuzununguka, uye chinoenderana ne ergonomic dhizaini.
Inotakurika Yemvura Bladder Backpack Tsvuku
Iyo yakanyatsogadzirwa bhegi remvura bhegi, haugone kungoisa bhegi remvura munzvimbo yekumashure, asi zvakare isa mabhodhoro maviri emvura akapfava munzvimbo yechipfuva, iyo inovandudza zvakanyanya kutakura zviwanikwa zvemvura.
Kunze Hydration Bladder Backpack yeCamp Hiking Cycling
Paunenge uchichovha bhasikoro, kumhanya, kukwira, kana kuyambuka-nyika kunze.Iwe unofanirwa kutsvaga imba yebhegi rako remvura kuitira kuti usunungure maoko ako uye utarise pane zvaunoita.Nylon zvinhu uye yakanakisa dhizaini inopa yakawanda nyore kune yako kurovedza muviri.
Outdoor sports cycling bhegi.Yepamusoro-mhando nylon PET zvinhu.Yakakura-inotakura nzvimbo, bhegi rinofema, rakapfava uye rakareruka, rinoramba kubvarura, rakanakira kunwa.Famba nemukwende wako kumusana wako, wakanakisa uye unotakurika, nyore kuenda kuhondo.
Iyo yekunze jira renaironi hydration bag rinogona kubata marita gumi nerimwe ehukuru hombe uye ine huremu dhizaini ye0.2 kg.Inokutendera kuti uitakure zvishoma kumusana wako paunenge uchiita mitambo yese yekunze.Hydration bag uye bhegi remvura vanogara vari vadyidzani vepamusoro.Iko kusanganiswa kwezvinhu zviviri izvi zvinokuunzira iwe yakanakisa yekunze mitambo chiitiko.